Eto amin'ity pejy ity ianao dia hahita mpitari-dalana feno fahefana sy feno ary feno amin'ny fepetra rehetra takiana amin'ny e-Visa karana. Ny antontan-taratasy rehetra takiana dia rakotra eto sy izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hampiharana ny e-Visa Indiana.
Hatramin'ny nanoloran'ny Governemanta India izany elektronika na e-Visa ho an'ireo mpitsangatsangana iraisampirenena hitsidika an'i India, nanjary asa mora ary mora koa izany. Ny tena ilainao dia ny mihaona ny Fepetra takiana amin'ny maha-Indiana sy Visa ho an'ny e-Visa Indiana ary koa vonona ny antontan-taratasy rehetra izay takiana aminao handefasana mba hangataka sy hahazoana ny e-Visa Indiana. Ny sasany amin'ireo antontan-taratasy takiana dia tokony halefa ho an'ny karazana e-Visa Indiana izay misy. Misy ihany koa ny antontan-taratasy manokana e-Visa, izany hoe, karazana e-Visa isan-karazany, toy ny Ilay mpizahatany Indiana e-Visa, Business e-Visa Indiana, E-Visa Indiana, ary Mpitsabo ara-pitsaboana Indiana e-Visa, izy rehetra dia mitaky antontan-taratasy manokana momba ny toetran'ny fitsidihanao an'i India.
Raha vantany vao fantatrao ny antontan-taratasy takiana amin'ny Visa any India dia azonao atao ny mangataka izany E-Visa indiana amin'ny Internet tsy mila mitsidika ny masoivohon'i India eo an-toerana ianao. Izany dia azo atao amin'ny telefaona findainao, PC ary takelaka misy anao. Azonao atao ny mandray kopia elektronika e-Visa karana voaray avy amin'ny Governemanta India amin'ny alàlan'ny mailaka ary mankany amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy ilaina ny manisy tombo-kase na fametahana sticker amin'ny pasipaoro.
Antontan-taratasy Visa any India takiana amin'ny karazana e-Visa rehetra
Ho fanombohana, mba hanombohana ny fizotry ny fangatahana ho an'ny Visa any India dia mila manana ireto antontan-taratasy manaraka takiana amin'ny Visa any India ireto ianao:
Kopian'ny mpitsidika sary loko fanao amin'ny pasipaoro vao haingana (ny tarehy ihany, ary azo alaina amin'ny telefaona iray), adiresy mailaka miasa, ary carte debit na carte de crédit ho an'ny fandoavana ny sarany fangatahana. Antsipiriany misimisy momba ny Fepetra takiana amin'ny sary e-Visa Indiana Voasarona Eto.
Ankoatra ny fanomanana ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny Visa any India ireo dia tokony ho tadidinao ihany koa fa zava-dehibe ny mameno ny Taratasy fangatahana e-Visa Indiana ho an'ny e-Visa karana miaraka amin'ny fampahalalana mitovy tanteraka izay aseho amin'ny pasipaoronao izay hampiasainao hivezivezy any India ary hifandray amin'ny Visa Indiana anao. Azafady azafady fa raha manana anarana afovoany ny pasipaoronao dia tokony ampidiroo ao amin'ny endrika e-Visa an-tserasera Indiana eto amin'ity tranonkala ity. Ny governemanta India dia mitaky ny tsy maintsy hifanaraka marina amin'ny anaranao e-Visa karana araka ny pasipaoronao ny anaranao. Anisan'izany ny:
Anarana feno, ao anatin'izany ny anarana / anarana omena, anarana afovoany, anaran'ny fianakaviana / anaranao
Adiresy, izay onenanao amin'izao fotoana izao
Laharana pasipaoro, toy ny aseho amin'ny pasipaoro
Ny zom-pirenena, araka ny pasipaoronao, tsy amin'ny toerana onenanao izao
Ankoatr'ireo antontan-taratasy Visa any Indianina ankapobeny takiana dia misy ihany koa ny takiana amin'ny antontan-taratasy manokana amin'ny karazana e-Visa izay angatahinao miankina amin'ny antony hitsidihanao an'i India ary ny tanjon'ny fitsidihanao. Ireo dia mety ho ny Tourist e-Visa ho an'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ny Business e-Visa ho an'ny tanjon'ny asa aman-draharaha sy ny varotra, ary ny e-Visa Medical sy ny mpitsabo e-Visa ho an'ny fitsaboana ary miaraka amin'ny marary. mahazo fitsaboana avy any India.
Antontan-taratasy Visa any India takiana manokana amin'ny e-Visa mpizahatany ho an'i India
Raha ho tonga any India ianao ho an'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia tokony hangataka ny Tourist e-Visa ho an'i India, izay ankoatry ny antontan-taratasy ankapobeny Visa any India dia takiana aminao. porofon'ny fanananao vola ampy hamatsy vola ny dianao ary mijanona any India.
Antontan-taratasy Visa any India takiana manokana amin'ny e-Visa ho an'ny orinasa any India
Raha mitsidika an'i India ianao mba handray anjara amin'ny hetsika ara-barotra voajanahary, toy ny orinasa na ny varotra, dia ankoatra ny antontan-taratasin'ny Visa India ankapobeny dia mila ireto antontan-taratasy manaraka manokana momba ny Business e-Visa ho an'i India ireto ianao:
Ny antsipirian'ny fikambanana indianina na foara fivarotana na fampirantiana izay ho tsidihin'ny mpandeha, ao anatin'izany ny anarana sy ny adiresin'ny referansa karana
Ny tranokalan'ny orinasa karana hitsidika ny mpandeha.
Ny karatra fandraharahana na ny sonian'ny mailaka ary koa ny adiresy tranokalan'ny mpitsidika.
Raha tonga any India ny mpitsidika hanao famelabelarana amin'ny Global Initiative for Academic Networks (GIAN) dia mila manome koa izy:
Fanasana avy amin'ny institiota izay hampiantrano ny mpitsidika ho mpampianatra mpampianatra mitsidika vahiny.
Kopian'ny kaomandy sazy sazy GIAN navoakan'ny National Coordinating Institute, izany hoe IIT Kharagpur.
Kopian'ny synopsis ny fampianarana izay horaisin'ny mpitsidika ho mpampianatra ao amin'ny institiota fampiantranoana.
Antontan-taratasy Visa any India takiana manokana amin'ny e-Visa ara-pitsaboana ho an'i India
Raha mitsidika an'i India amin'ny maha-marary anao ianao mba hahazoanao fitsaboana avy amin'ny hopitaly any India, dia ankoatra ireo antontan-taratasin'ny Visa India ankapobeny dia mila ireto antontan-taratasy manaraka manokana momba ny e-Visa Medical ho an'ny India ireto ianao:
Ny kopian'ny taratasy iray avy amin'ny Hopitaly Indianina izay notadiavin'ny mpitsidika fitsaboana (ny taratasy dia tokony hosoratana amin'ny loha-taratasy ofisialin'ny hopitaly).
Ny mpitsidika dia takiana ihany koa hamaly izay fanontaniana rehetra momba ny Hopitaly India izay hotsidihin'izy ireo.
Antontan-taratasy Visa any India takiana manokana ho an'ny mpitsabo e-Visa ho an'i India
Raha mitsidika an'i India ianao amin'ny maha-mpianakavy anao miaraka amin'ny marary iray izay tonga any India mba hahazoana fitsaboana amin'ny hopitaly any India, dia ankoatry ny antontan-taratasin'ny Visa Indiana ankapobeny dia takinao izanyo mila antontan-taratasy manokana momba ny Medical Attendant e-Visa ho an'i India izay hanaporofo fa ilay olona miaraka aminao dia mitazona na nangataka visa e-Visa:
The anaran'ilay marary izay tsy maintsy tompon'ny Visa Medical.
The Isa e-Visa Indiana na ny ID fangatahana an'ny manana Visa Visa.
Andininy toa ny Laharan'ny pasipaoro an'ny mpihazona Visa ara-pitsaboana, ny daty nahaterahan'ny tompona Visa ara-pitsaboana, ary ny zom-pirenenan'ilay manana Visa Visa.
Raha efa vonona ireo antontan-taratasy rehetra takiana amin'ny Visa any India ireo ianao, fenoy ny fepetra rehetra ilaina amin'ny Visa any India, ary mangataka farafahakeliny 4-7 andro mialoha ny sidinao na ny daty hidiranao ao amin'ny firenena, dia tokony ho afaka mangataka mora foana amin'ny Fangatahana fangatahana Visa any India dia tsotra sy mahitsy. Tsy tokony hahita olana ianao amin'ny fampiharana sy fahazoana ny Visa any India. Raha toa kosa ka mila fanazavana ianao tokony Fanohanana sy birao fanampiana e-visa karana ho fanampiana sy fitarihana. Ny ankamaroan'ny valinteninao dia tokony ho rakotra eto amin'ny Fanontaniana Fametraky ny Olona.